ချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ ဧရာဝတီမြစ် မုတ်သုံအားပြတ်၍ ရေများ တက်လာနိုင်ဟု ဦးထွန်းလွင် သတိပေး….
July 10, 2019 Thuta Star 0
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၀)ရက်မှ(၁၆)ရက်နေ့အထိ ရက်တစ်ပတ်အတွင်း ရာသီ အ ခြေ အ နေ မုတ်သုံအားပြတ်၍ ချင်း တွင်း မြစ် နဲ့ ဧရာဝတီမြစ်ရေများ တက်လာနိုင်ပါတယ်။ ၁၀-၇-၂၀၁၉ နံနက်(၀၁း၂၆)နာရီ။ ဟိမ၀န္တာတောင်ခြေ၊ မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း နဲ့အလယ်ပိုင်း၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ […]
သင်္ချိုင်းဂူထဲမှ အသက်ပြန်ရှင်လာသော ၁၆ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး( ရုပ်သံ )….
သင်္ချိုင်းဂူထဲမှ အသက်ပြန်ရှင်လာသော ၁၆ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး ရုပ်သံ ကိုယ်ဝန် ၃ လွယ် ထားရသော ၁၆ နှစ်အရွယ် “နေစီပရက်စ်” အမျိုးသမီးငယ်သည် နေအိမ်ပြင်ပ တစ်နေရာတွင် ထိန့်လန့်ဖွယ်ရာ တိုက်ခိုက်ခြင်း ခံခဲ့ရ တာကြောင့် မူးမေ့ လဲကျခဲ့ပြီး ပါးစပ်မှ အမြုတ်တစီစီထွက်နေသဖြင့် ဆွေမျိုး […]
သဘင်လောကသားများအတွက် တိုက်ခန်းတွေ ဆောက်လုပ်ပေးနေတဲ့ မင်းသား ဖိုးချစ် …
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာ နေထိုင်တဲ့ သဘင်အနုပညာရှင်များ နေစရာအတွက် အခက်အခဲမရှိ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့အတွက် သဘင်အဖွဲ့ အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ ဖိုးချစ်က ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်မှာ သဘင်အိမ်ရာ စီမံကိန်းကြီးကို အကောင်ထည်ဖော်နေပြီး မကြာခင်မှာ သဘင်လောကသားများ ငြိမ်းချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်တော့မှာ ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာလိုက်ပါပြီ။ မိသားစု (၅၀၀)နဲ့ (၁၀၀၀) ကြားနေထိုင်ခွင့် […]
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် Victoria အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးစာပြန်ကြားချက်၊ CCTV မှတ်တမ်း၊ ဓါတုဗေဒဆိုင်ရာ စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်၊ မေးမြန်းစစ်ဆေးထားသူများ၏ သက်သေခံ ထွက်ဆိုချက်များ အပါအဝင် အခြားအခြားသောအထောက်အထားများဖြင့် ခရိုင်ဥပဒေရုံး၏ အကြံပြုချက်နှင့် အညီ တရားရုံးသို့ အမှုစွဲတင်ခဲ့ပါကြောင်း။ CID အနေဖြင့် CCTV အထောက်အထားကို Software နည်းပညာအရ […]
YBS 14 ပေါ်မှာ ဖင်ခွဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး (ရုပ်သံ)…
YBS 14 ပေါ်မှာ ဖင်ခွဲ ခံလိုက်ရတဲ့ ကောင်မလေး ရုပ်သံ ဒီနေ့ ညီမ YBS (14) ပေါ်မှာ ဘောင်းဘီ ဖင်ခွဲ ခံလိုက် ရပါတယ် (ဖင်နေရာပဲ ရွေးခွဲ ခံရတာမို့ ဖင်ခွဲတယ်လို့ပဲ ရေးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်) ဘောင်းဘီ အရှည် ၀တ်ထားခြင်း […]
ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၄ ထိတက်လာတဲ့ မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် သက်ထားသူဇာ
မြန်မာကြက်တောင်ရိုက် အားကစားမယ် မသက်ထားသူဇာဟာ ကမ္ဘာ့ကြက်တောင်ရိုက် အဖွဲ့ချုပ်က မနေ့က ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ အဆင့် ၈၄ အထိ တက်လာပါတယ်။၂၀၂၀ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မသက်ထားသူဇာဟာ ဇူလိုင်လ ၇ ရက်က အိုင်ဗရီကို့စ်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ International Series ကြက်တောင်ရိုက်ပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်စွဲပြီး ချန်ပီယံဆု […]
မုဒိမ်းသမားတွေကို အပြစ်ရှိကြောင်း တရားစီရင်နိုင်ခဲ့တဲ့ အဓိက သက်သေ ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ကထိုင်းနိုင်ငံ ခွန်ကင် ခရိုင်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာရွေ့ ပြောင်းအလုပ်သမားရဲ့သမီး မိန်းခကလေး ကို အိမ်သာထဲခေါ်သွားပြီး – မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တဲ့ တရားခံကို ဘာအချက်တွေနဲ့တရားခံအဖြစ်အတည်ပြုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ခွန်ကင် ရဲမှူးက […]
နေပြည်တော်က ဗစ်တိုးရီးယားဟု အမည်ပေးထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်ခံရသည့် မိန်းကလေးငယ် အမှုကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကို ပျဉ်းမနားရဲစခန်းမှ အီလက်ထရောနစ်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၄(ဃ)ဖြင့် အမှုဖွင့် စစ်ဆေးပြီးနောက် ကျပ်သိန်း (၁၀၀)အာမခံ ပေးခဲ့သည်။ သက္ကမိုးညို အကောင့်ပိုင်ရှင် ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာဝင်းကိုကိုသိန်းကို […]
စီးပွားဥစ္စာ အလျှံပါယ်ပေါမည့် လက္ခဏာ..
စီးပွားဥစ္စာ အလျှံပါယ်ပေါမည့် လက္ခဏာ မူရင်း လက်ဝါးပုံ ကိုပါ တွဲတင်ပေးလိုက်ပါသည။် လက်သူကြွယ်အောက် အဖြူရောင်ဖြင့် ဝိုင်းပြသည့်ထဲကြည့်ပါ က “ငါးရုပ်သင်္ကေတပုံ´´ထင်ရှားပြတ်သားစွာ မြင်တွေ့ရ မည်။ ငါးရုပ်သည် လက်ဝါးပြင်၌ မည်သည့်နေရာ၌ ရှိရှိ ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာ ကိုပေးသည်။ ယခုပုံ လက်သူကြွယ် အောက်ရှိ ငါးရုပ် သည် […]
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်… ဂရုစိုက်ကြပါဗျာ…
နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ် ခုနောက်ပိုင်း ဆိုင်ကယ်တွေမှာ အမိုးလေးတွေ တော်တော်များများ တတ်စီးနေတာကိုတွေ့ရပါသည်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကာကွယ်ဘို့လား/မိုးရွာတဲ့အခါ အကာအကွယ်ဖြစ်အောင်လား /Styleဖြစ်အောင်လို့လား/ထင်မိပါသည်။ သို့သော် ဆိုင်ကယ်စီးစဉ်မှာ မိမိအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်ပေးနိုင်ဆုံး အဓိကအရာဖြစ်သည့် ဆိုင်ကယ်စီးဦးထုပ်ကိုတော့ဖြင့် မေ့လျှော့နေတာလား ? တမင်ချန်ထားခဲ့လေသလား?Showပဲ့မှာဆိုးလို့လား? (နည်းနည်းလေးတော့ လွဲနေတယ်) ဒီအမိုးလေးဟာ ဆိုင်ကယ်မောင်းသူအတွက် အဟန့်အတားတစ်ခုဖြစ်နေသလို/အန္တရာယ် ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပါဘဲ (ဥပမာ […]